Imboni Yezemvelo - I-Baoding Lead Fluid Technology Co., Ltd.
I-Flue Gas Monitoring Environmental Protection
I-Continuous flue gas emission monitoring System (CEMS) ibhekisela kudivayisi ehlala iqapha ukugxiliswa kanye nengqikithi yokukhishwa kwezinto ezingcolisa umoya kanye nezinhlayiyana ezikhishwa imithombo yokungcoliswa komoya futhi idlulisele ulwazi kusiphathimandla esinekhono ngesikhathi sangempela.Ngokuthatha amasampula esizeni, ukugcwala kwezinto ezingcolisa umoya kugesi kuyalinganiswa, futhi imingcele efana nezinga lokushisa legesi ephuma kumanzi, ingcindezi, izinga lokugeleza, umswakama, nokuqukethwe komoyampilo kuyalinganiswa ngesikhathi esifanayo, kanye nezinga lokuphuma kanye nenani le-flue. kubalwa ukungcola kwegesi.
Ngemuva kokuthi igesi yesampula ingene kukhabhinethi yokuhlaziya, umswakama wegesi yesampula uhlukaniswa ngokushesha ngesistimu yokukhipha umswakama futhi amanzi ahlanganisiwe akhishwe.Isistimu yokunciphisa umswakama ngokuvamile yenziwe nge-condenser, i-sampling pump, ipompo ye-peristaltic kanye ne-alamu ehlobene futhi ukulawula izingxenye.Iphampu ye-peristaltic isetshenziselwa ukukhipha i-condensate.
Amaphutha avamile we-flue gas online monitoring system yilezi: umphumela wokupholisa we-condenser awulungile, futhi inani elikhulu lomswakama kugesi wesampula alihlukaniswanga, elithinta ukusebenza okuvamile kwe-flue gas analyzer.Uma igijima isikhathi eside, izolimaza i-analyzer.
Ukuqapha igesi kudinga ukuqinisekisa ngokuqinile ukucinana kohlelo lokuqapha.Ngakho-ke, isistimu yokukhipha i-condensate iyadingeka ukuze ibe nokucinana okuhle ukuvimbela umoya wangaphandle ukuthi ungangeni ku-condenser ngokusebenzisa uhlelo lokudonsa amanzi futhi uthinte ukwakheka kwegesi yesampula.
I-condensate inokwakheka kwamakhemikhali okuyinkimbinkimbi futhi iyagqwala.Ngakho-ke, uhlelo lokudonsa amanzi e-condensate kumele lube nokuvikeleka okuhle kokugqwala.Uma isampula lomphumela wokuhlunga igesi ungemuhle, amanzi ajiyile azoqukatha izinhlayiya eziqinile, futhi isistimu yokukhipha amanzi ajiyile kufanele ifanele uketshezi oluqhumayo.Iphampu yokudonsa kufanele ifanele indawo ye-vacuum futhi ingasebenza ngokuqhubekayo.
KT15 uchungechunge peristaltic futha
• Amakhanda epompo e-Lead Fluid KT15 afanele i-ID0.8~6.4mm, ukujiya kodonga1.6mm Pharmed, ishubhu le-silicone, i-Viton njll., ingasebenza ngokuqhubekayo ngaphansi ngo-100rpm kanye nesilinganiso sokugeleza kwe-Max 255ml/min, ukugijima kwesikhawu, Isivinini esikhulu esingu-250rpm , ukugeleza okukhulu r kudle 630ml/min.
•Umzimba we-KT15 futha we-roller osebenzisa isakhiwo esingaguquki esingaguquki, unganikeza ukunemba kobubanzi bokugeleza okushelelayo nokuphila okuhle kweshubhu.
•Igebe leshubhu yokucindezela lingalungiswa kahle, lilungele ukushuba odongeni oluhlukile futhi likhiphe ingcindezi eyengeziwe.
•Umzimba wekhanda wepompo usebenzisa izinto ze-PPS, umzimba wama-roller usebenzisa izinto ze-PVDF, izakhiwo ezinhle kakhulu zemishini kanye nokumelana namakhemikhali.
•Isembozo sekhanda sepompo sisebenzisa ipulasitiki ekhanyayo, ukubuka isimo sokusebenza sangaphakathi sepompo kalula, ukuvikela ngempumelelo imfucumfucu yangaphandle ekhanda lepompo, umsebenzi wokuvala ikhava evulekile(uyazikhethela).
•Ishubhu yokufaka inezinhlobo ezimbili: isixhumi esakhelwe ngaphakathi nesiqeshana seshubhu lasentwasahlobo, esilungele imfuneko yokusebenza okwengeziwe.
•I-Supply Type 57 stepper motor, i-AC synchronous motor kanye ne-AC/DC gear motor drive, iphaneli kanye nebhodi eliphansi indlela engaguquki, ilungele ukusebenzisa amathuluzi nezinto zokusebenza eziguquguqukayo ezincane neziphakathi nendawo.
Iphampu ye-peristaltic yochungechunge lwe-TY15
• I-Lead Fluid TY15 (ukulayisha kalula kwentwasahlobo) inhloko yepompo isebenzisa idizayini yesakhiwo esilayisha kalula, ukucindezela okuphezulu okuvumelana nezimo, isakhiwo se-spring roller, ishubhu kulula ukuyifaka futhi inempilo ende yesevisi.
•Umzimba werola unomklamo wesondo lokubamba, futhi ishubhu linokwethenjelwa okuphezulu kokugijima .
•Ifakwe isixhumi esikhethekile seshubhu, ithubhu ilungiswa ngokuthembekile.
•Umshini wonke wenziwe ngezinto eziphezulu zokusebenza ezinezakhiwo eziphezulu zemishini kanye nokumelana okuhle kwamakhemikhali.
•Ifanele izinhlobo zezinjini.Ifanele izicelo zokugeleza okuphakathi, ingasetshenziswa kumishini, insimbi, ilabhorethri, njll., ifanele i-COD, i-CEMS yokuqapha ku-inthanethi.
Izinzuzo zepompo ye-Lead Fluid peristaltic
1. Inomoya omuhle, akukho valve ne-seal edingekayo, futhi akukho ukugeleza kwe-liquid backflow kanye ne-siphon okuzokwenzeka.Ngisho nalapho iphampu ingasebenzi, i-hose izocindezelwa futhi ivalwe kahle, engavimbela umoya wangaphandle ukuthi ungangeni ku-condenser ngokusebenzisa uhlelo lokudonsa amanzi futhi uthinte imiphumela yokuhlaziywa kwegesi.
2. Lapho udlulisela uketshezi, uketshezi luthintana nomgodi ongaphakathi wepayipi kuphela.Ukukhetha ipayipi elenziwe ngezinto ezifanele ukumelana nokugqwala kungasetshenziswa ukudlulisa i-condensate egqwalayo isikhathi eside.
3. Ngamandla aphansi we-shear, lapho udlulisela uketshezi oluqukethe izinhlayiya eziqinile, ngeke kube nezinkinga ze-jamming, futhi ngeke kuthinte impilo yesevisi yepompo.
4. Ngekhono eliqinile lokuzibamba, futhi iphampu ingakwazi ukoma ngaphandle kokulimala, ingakhipha ngokuphumelelayo i-condensate futhi inciphise izindleko zokulungisa.